Cusbooneysiinta cusub ee Ubuntu 18.04.4 LTS ayaa horeyba loogu sii daayay cilado kala duwan | Laga soo bilaabo Linux
Toddobaadkii hore Canonical ayaa shaaca ka qaaday wuxuu ku dhawaaqay sii deynta Ubuntu cusub 18.04.4 LTS cusbooneysiinta Bionic Beaver, tani waa nooc loogu talagalay desktop-ka, serverka iyo daabacaadda daruuraha ee qaybinta.
Ubuntu waa mid ka mid ah nidaamka qalliinka ugu saadaalinta badan ee la saadaalin karo marka la eego wareegga sii deynta (Nooc cusub ayaa la sii daayaa bilaha Abriil iyo Oktoobar ee sannad kasta). Inta badan noocyadan waa noocyo dhexdhexaad ah, oo la taageeray sagaal bilood laga soo daayay; laakiin nooca bisha Abriil ee sannad kasta oo xitaa la tiriyey waa LTS (Adeeg Muddo Dheer), oo ay taageerayaan shan sano.
“Kooxda Ubuntu waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo sii deynta Ubuntu 18.04.4 LTS (taageero muddo dheer ah) oo loogu talagalay desktop-keeda, serverka iyo alaabada daruuriga ah, iyo sidoo kale Ubuntu kale oo lagu sii daayo taageero waqti dheer ah.
Sida taxanaha LTS ee hore, 18.04.4 waxaa kamid ah baytariyada kiciya qalabka si loogu isticmaalo qalabka cusub. Taageeradan waxaa lagu bixiyaa dhammaan qaab dhismeedka, waxaana lagu rakibay si caadi ah markii la isticmaalayo mid ka mid ah sawirrada desktop-ka, ayuu yidhi Łukasz Zemczak, Canonical.
Ka sokow inuu la socdo Linux 5.3 kernel,Ubuntu 18.04.4 waxay taageertaa chips cusub oo AMD iyo Intel ah oo ay ku jiraan sawiro isku dhafan, wadayaasha lahaanshaha ee Nvidia ee ay bixiso Ubuntu waxay heleen dhowr cusbooneysiin oo daboolaya kaararka sawirada cusub oo sidoo kale bixiya maaraynta safka shabakada oo ay tahay inuu noqdo mid aad ufiican iwm.
Sidoo kale Imaatinka Taageerada Hordhaca ee Wi-Fi 6 Waxyaabaha muhiimka ah (802.11ax) (faahfaahinta badeecooyinka laga hadlayo) lama bixin).
Ubuntu 18.04.4 LTS wuxuu hagaajiyaa dhowr cilad yar oo suurtagal ah inta lagu jiro rakibidda, oo ay ku jiraan cayayaanka mararka qaarkood ka hortagaya xiritaanka nadiifka ah ama dib u soo kabashada deegaanka rakibida. Waxa kale oo jira qaar ka mid ah hagaajinta cilladaha yaryar si loo cusbooneysiiyo rakibidda, laakiin fasalka ugu weyn ee balastarku wuxuu saameeyaa nidaamka laftiisa sidoo kale wuxuu ku daray xirmo wslu oo leh dejin iyo utility si loogu daro Ubuntu deegaanka WSL (Windows Subsystem for Linux).
"Sida caadiga ah, sii deyntaan waxaa ka mid ah cusbooneysiinno badan, iyo qalabka wax lagu rakibo ee la cusbooneysiiyay ayaa la bixiyay si markaa wax yar oo cusbooneysiin ah looga baahan yahay in la soo dejiyo ka dib rakibidda Kuwaas waxaa ka mid ah cusbooneysiinta amniga iyo hagaajinta cilladaha kale ee saameynta sare leh, iyadoo diirada la saarayo ilaalinta xasiloonida iyo iswaafajinta Ubuntu 18.04 LTS.
Isbedelada kale ee ka dhex muuqda cusbooneysiintan:
Software-ka Gnome-ka ayaa helay dhowr wax ka beddelidda adeegsadaha.
Macaamiisha emailka Thunderbird waxay heshay nooc cusub oo kor u kaca ah.
WSL (Windows Subsystem for Linux) bay'aduhu hadda waxay si sax ah u ogaadaan, u rakibaan una bilaabaan X11 iyo PulseAudio ee Windows.
Nidaamka weelka xirmooyinka ee Canonical, snapd, ayaa helay nooc cusub oo kor u kaca ah.
Amazon web launcher, oo ay tahay inuu tago LTS-ka soo socda (20.04 Focal Fossa) ee sanadkan, ayaa laga saaray Ubuntu 18.04 iyadoo la sii daayay.
Cusboonaysii siyaasadda dejinta si helitaanka duubista codku ay shuruud u tahay isku xidhka isweydaarsiga «pulseaudio» ama «audio-record».
Dib-u-hagaajinta Backport ee loogu talagalay digniinta qalad-celinta ee la soo bandhigay markii la isku xidhayo AP oo leh astaamo gaar ah
Dib ugu soo celi bionic wixii ku saabsan 18.04.4 HWE cusboonaysiinta.
Ugu dambeyntiina, haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato daah-furkan, waxaad ka eegi kartaa faahfaahinta daabacaadda ay sameysay Canonical Xiriirka soo socda.
Sidee loo cusbooneysiiyaa Ubuntu 18.04.4 LTS?
Ubuntu 18.04.4 LTS hadda waxay ikhtiyaari ahaan u isticmaali kartaa kernel-kii ugu dambeeyay ka yimid Linux 5.3, Mesa iyo qaybaha la xiriira ee 19.10 si loo bixiyo taageero qalab wanaagsan marka loo barbar dhigo 18.04.3 kii hore iyada oo la adeegsanayo xarig HWE ah oo ka socda faylka 19.04.
Sidaas darteed, kuwa xiiseynaya inay awoodaan inay helaan cusbooneysiinta noocaan cusub, waxay u wareejin karaan rakibaaddooda hadda jira nuqullada cusub iyo qaababka xargaha iyagoo adeegsanaya amarka soo socda:
Haddii aadan haysan rakibitaan hore ee Ubuntu 18.04 LTS, waxaad ku heli kartaa sawirka nidaamka adoo aadaya bogga rasmiga ah ee Ubuntu. Xiriiriyaha waa kan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Cusbooneysiinta cusub ee Ubuntu 18.04.4 LTS ayaa horeyba loogu sii daayay cilado kala duwan
Blender 2.82 waxay la timid jilitaanka dareeraha iyo gaasaska iyo inbadan